Eksodho 26 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
26 “Zvino unofanira kugadzira tebhenekeri nemachira gumi etende,+ akagadzirwa nerineni yakanaka kwazvo yakakoswa neshinda yebhuruu nemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka neshinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi.+ Uagadzire aine makerubhi,+ rive basa romunhu anomenda. 2 Jira rimwe nerimwe retende ngarive rakareba makubhiti makumi maviri nemasere uye jira rimwe nerimwe retende rakafara makubhiti mana. Machira ose etende ngaave akakura zvakafanana.+ 3 Machira mashanu etende ngaatevedzane, rimwe rakabatanidzwa nerimwe, uye mamwe machira mashanu etende ngaatevedzane, rimwe rakabatanidzwa nerimwe.+ 4 Ugadzire zvishwe zveshinda yebhuruu pamupendero wejira retende riri pokupedzisira pane akatevedzana; uitewo saizvozvo pamupendero wejira retende riri pokupedzisira riri panobatana chimwe chipenga nechimwe chacho.+ 5 Ugadzire zvishwe makumi mashanu pajira retende rimwe chete, uye ugadzire zvishwe makumi mashanu pamupendero wejira retende riri panobatana chimwe chipenga nechimwe chacho, zvishwe zvacho zvakatarirana.+ 6 Ugadzire zvokukochekera nazvo zvendarama zvine makumi mashanu, wobatanidza machira acho etende uchishandisa zvokukochekera nazvo, ive tebhenekeri imwe chete.+ 7 “Unofanira kugadzira machira emvere dzembudzi+ etende repamusoro petebhenekeri. Ugadzire machira gumi nerimwe etende. 8 Jira rimwe nerimwe retende ngarive rakareba makubhiti makumi matatu,+ uye jira rimwe nerimwe retende ngarive rakafara makubhiti mana. Machira acho etende gumi nerimwe ngaave akaenzana. 9 Ubatanidze machira etende mashanu ari oga uye machira etende matanhatu ari oga,+ upete jira retende rechitanhatu kaviri nechokumberi kwetende racho. 10 Ugadzire zvishwe makumi mashanu pamupendero wejira retende rimwe chete, rinenge riri kwokupedzisira pane akatevedzana, nezvishwe makumi mashanu pamupendero wejira retende rinenge riri panobatana chimwe chipenga nechimwe chacho. 11 Ugadzire zvokukochekera nazvo zvemhangura+ zvine makumi mashanu, uzvikochekere muzvishwe wobatanidza tende racho pamwe chete, rive rimwe chete.+ 12 Zvikamu zvinosara zvemachira etende ngazvirembere. Hafu yejira retende rinosara ngairembere necheshure kwetebhenekeri. 13 Kubhiti rokurutivi rwuno nekubhiti rokurutivi urwo pane zvikamu zvinosara pakureba kwemachira etende ngazvirembere kumativi etebhenekeri, kuti zviifukidze kurutivi rwuno nourwo. 14 “Unofanira kugadzirira tende racho chokufukidzisa chematehwe emakondohwe akaiswa ruvara rutsvuku nechokufukidzisa chematehwe emasiri nechepamusoro. 15 “Unofanira kugadzirira tebhenekeri mapuranga emadziro+ nomubayamhondoro, anomiswa kumucheto. 16 Puranga remadziro rinofanira kuva rakareba makubhiti gumi, uye puranga remadziro rimwe nerimwe rinofanira kuva rakafara kubhiti nehafu. 17 Puranga remadziro rimwe nerimwe ngarive nemiromo miviri yokuribatanidza nerimwe. Ndizvo zvaunofanira kuita nemapuranga ose emadziro etebhenekeri. 18 Ugadzirire tebhenekeri mapuranga emadziro, mapuranga makumi maviri emadziro okurutivi rwakatarira kuNegebhu, kumaodzanyemba. 19 “Unofanira kugadzira zvigadziko+ zvesirivha makumi mana pasi pemapuranga makumi maviri emadziro; zvigadziko zviviri zviri pasi pepuranga remadziro rimwe chete rine miromo miviri, uye zvigadziko zviviri zviri pasi perimwe puranga remadziro rine miromo miviri. 20 Uye kune rumwe rutivi rwetebhenekeri, rutivi rwokuchamhembe, ugadzire mapuranga makumi maviri emadziro,+ 21 nezvigadziko zvawo zvesirivha makumi mana, zvigadziko zviviri zviri pasi pepuranga remadziro rimwe chete uye zvigadziko zviviri zviri pasi perimwe puranga remadziro.+ 22 Ugadzirire zvikamu zveshure zvetebhenekeri zvokumavirira mapuranga matanhatu emadziro.+ 23 Ugadzire mapuranga maviri emadziro kuti ave mbiru dzemakona etebhenekeri+ pazvikamu zvayo zviviri zveshure. 24 Ari maviri anofanira kuva akagadzirwa zvakafanana nechepasi, uye pamwe chete anofanira kuva akagadzirwa zvakafanana kusvikira kumusoro kwerimwe nerimwe parin’i yokutanga. Ndizvo zvaanofanira kuva akaita ari maviri. Achava mbiru mbiri dzepamakona. 25 Panofanira kuva nemapuranga masere emadziro nezvigadziko zvawo zvesirivha, zvigadziko gumi nezvitanhatu, zvigadziko zviviri zviri pasi pepuranga remadziro rimwe uye zvigadziko zviviri zviri pasi perimwe puranga remadziro. 26 “Unofanira kugadzira mbariro nomuti womubayamhondoro,+ shanu dzemapuranga emadziro orutivi rumwe rwetebhenekeri, 27 uye mbariro shanu dzemapuranga emadziro orumwe rutivi rwetebhenekeri nembariro shanu dzemapuranga emadziro orutivi rwetebhenekeri nokuda kwezvikamu zviviri zveshure zviri nechokumavirira.+ 28 Mbariro yepakati iri nechepakati pemapuranga emadziro inofanira kubva kumucheto ichisvika kumucheto. 29 “Unofanira kufukidza mapuranga emadziro nendarama,+ uye ugadzire marin’i awo nendarama kuti ave zvokubata nazvo mbariro; ufukidze mbariro dzacho nendarama. 30 Umise tebhenekeri yacho maererano nepurani yayo yawakaratidzwa mugomo.+ 31 “Unofanira kugadzira keteni+ neshinda yebhuruu nemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka neshinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi nerineni yakakoswa yakanaka kwazvo. Ngaarigadzire riine makerubhi,+ rive basa romunhu anomenda. 32 Uriise pamusoro pembiru ina dzomubayamhondoro dzakafukidzwa nendarama. Hoko dzaro ngadzive dzendarama. Ngadzive pazvigadziko zvina zvesirivha. 33 Uise keteni racho pasi pezvokukochekera nazvo, wounza areka yechipupuriro+ imomo mukati meketeni; keteni riparadzanise Nzvimbo Tsvene+ neNzvimbo Tsvenetsvene+ nokuda kwenyu. 34 Uise chifukidziro pamusoro peareka yechipupuriro iri muNzvimbo Tsvenetsvene. 35 “Unofanira kuisa tafura kunze kweketeni, nechigadziko chemarambi+ chakatarisana netafura iri kurutivi rwetebhenekeri nechokumaodzanyemba; uise tafura kurutivi rwokuchamhembe. 36 Ugadzire chinhu chinovhara+ pasuo retende neshinda yebhuruu nemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka neshinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi nerineni yakakoswa yakanaka kwazvo, rive basa romuruki. 37 Ugadzirire chinhu chacho chinovhara mbiru shanu dzomubayamhondoro, wodzifukidza nendarama. Hoko dzadzo ngadzive dzendarama. Udziumbire zvigadziko zvishanu zvemhangura.